Xafiiska Caafimaadka Deephaven | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay iskaashi la yeeshaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ee ka dhex jira dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayda si loogu guuleysto ardayga. Kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee shatiga haysta (LSN) iyo xirfadlayaasha caafimaadka ayaa si wada jir ah u wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jireed, bulsho, iyo shucuur ardayda, marka lagu daro kor u qaadida caafimaadka iyo badbaadada bulshada dugsiga oo dhan.
Xafiisyadayada caafimaadka dugsigeena waxaa ka shaqeeya maalin kasta arday xirfadlayaal ah oo adeegyada caafimaadka ah oo leh kalkaaliye caafimaad oo shati leh oo ka shaqeeya dugsiga dhismaha ama ka-wicitaanka degmada.
Sii daryeel caafimaad oo degdeg ah iyo gargaarka degdegga ah ardayda iyo shaqaalaha cudurrada iyo dhaawacyada qaba.
Daryeel loo fidiyo ardayda qaba xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada sida ay u igmatay LSN.
Joogtee dukumiintiyada talaalada iyo arrimaha kale ee caafimaadka iyada oo qayb ka ah diiwaanada caafimaadka ardayda.
U maamul dawooyinka sida ay u igmatay LSN.
Ka caawi la socodka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan walaacyada la is qaadsiin karo.
Ka aqoonsan yahay CPR iyo Gargaarka Koowaad ee tababbaran.
Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee shatiga haysta
Si wada jir ah ula shaqeynta xirfadlayaasha caafimaadka, kor u qaadida iyo ilaalinta caafimaadka iyo wanaaga ardayda oo dhan.
U wakiisho oo kormeerto daryeelka gargaarka degdegga ah, maamulka daawooyinka, iyo habraacyada caafimaadka.
Qiimeyn, qorsheyn iyo dokumenti u samee ardayda leh arrimaha caafimaadka.
La siiyo lana qorsheeyo adeegyada tooska ah ee ardayda jirran ama caafimaad ahaan jilicsan ee u baahan habraacyada caafimaadka.
Qorsheyso oo aad siiso aragga, maqalka iyo baaritaanka maqaarka iyo gudbinta.
Sii wadatashi caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
Bixi tixraacyo ilaha bulshada.
Isuduwidda kahortagga iyo xakamaynta tabashooyinka la is qaadsiiyo.
Ma yihiin kalkaaliyayaal caafimaad oo diiwaangashan oo haysta shahaadada jaamacadeed oo shati ka haysta caafimaadka dadweynaha iyo kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga.
Siyaasadaha Caafimaadka Degmada
Adeegyada Caafimaadka (Siyaasadda 545)
Tallaalada (Siyaasadda 530)
Anaphylaxis ee Iskuulka (Qaanuunka 517)
Daawada (Siyaasadda 516)
Welwelka Caafimaadka iyo Xaaladaha Joogtada ah
Fariin ku saabsan Coronavirus- 2-28-20
Caymiska Daryeelka Caafimaadka Minnesota ee Carruurta (Telefoon: 877-KIDS-AQOON)